३ सय किलो तौल घटाइन संसारकै मोटी महिलाले – Everest Dainik – News from Nepal
३ सय किलो तौल घटाइन संसारकै मोटी महिलाले
मोटोपनाका बारेमा धेरै भ्रमहरु रहेका छन्, यसलाई सहीरुपमा बुझ्नु जरुरी छ
काठमाडौं, दुई तीन किलो तौल घटाउन समेत हम्मे हम्मे पर्छ हैन ? तर, मोटापन घटाउन खोजिरहेकाहरुलाई एउटा सुखद समाचार छ, संसारकै सबैभन्दा मोटो महिलाका रुपमा गिनिज बुकमा समेत नाम दर्ता भएकी महिलाले डेढ सय किलो तौल घटाएकी छिन् ।
अचम्म लाग्छ हैन, डेढसय किलो ? सुन्दा । तर यो साँचो हो ।
पढ्नुस् कसरी घटेछ उनको तौल ?
यी महिलाको नाम हो– इमान अहमद । कुनै बेला यिनको तौल थियो ५ सय किलो अर्थात् आधी टन । तर मुम्बई र आबुधाबीमा उपचारपछि यिनले ३ सय किलो भन्दा बढी तौल घटाएकी छिन् । अहिले उनी १ सय ८५ किलो छिन् ।
गत फेबु्रअरीमा उनी उपचारका लागि इजिप्टबाट भारतको मुम्बई आएकी थिइन ।
मुम्बई उनको सर्जरी गरियो । मुम्बईमा उनको तौल आधा घट्यो । २ सय ५० किलोकि भइन उनी । त्यसपछि अभिभावकहरुले उनलाई आबुधाबी लगेर गए । मुम्बईमा प्रसिद्ध सर्जन मुज्जफल लकडवालाले उनको उपचार गरेका थिए । डा. लकडवालाका अनुसार, स्लीवे गेस्ट्रोक्टोमी र सुपरभाईज स्पेशल डाइटका कारण इमानले दुई महिनामा आधा तौल कम गर्न सकिन । तौल कम भएपछि मृगौला, फोक्सो, मुटुलगायतमा समेत सुधार आएको उनले बताए ।
मोटोपनाकै कारढा दायाँ हात र दायाँ खुट्टा चल्दैनथे उनका । तर अब उनी सजिलैसँग आफ्नो मुहार छुन सक्छिन् ।
बिरलै देखिने जेनेटिक डिसअर्डरका कारण इमान मोटी भएको डाक्टर बताउँछन् । यसका पछाडि एलएपीआर जीनमा दुर्लभ प्रकृतिको म्यूटेशन मुख्य कारण थियो । इमानको जीनमा होमोजोएगस मिसेन्स भेरिएण्ट भेटिएको थियो । यसले उनको शरीरमा मोटोपना भरिन थाल्यो । भोक र सन्तुष्टिको भावनाको संकेत उनको मष्तिष्कसम्म पुग्न सक्दैनथे, त्यसैले उनले आवश्यकता भन्दा बढी खाने गर्थिन ।
थाहा पाउनुस् मोटोपनाका बारेमा विशेष कुरा (नारी पत्रिकाबाट)
धेरैजसो महिला आफ्नो तौल बढ्नुमा खाना नै प्रमुख कारण भएको अनुमान गर्छन्। उपयुक्त खुराक छान्न नसक्नु तथा गलत समयमा खाना खानु नै आफ्नो तौल बढ्नुको प्रमुख कारण भएको उनीहरूलाई लाग्छ। खाना र तौलबीच केही सम्बन्ध भए पनि लगातार तौल बढ्नुको कारण खाना मात्र हुँदैन। विश्वमा मोटा मानिसहरूको संख्या त्यहीँ धेरै छ, जहाँका मानिसहरू बढी व्यस्त छन्। जसले खानालाई भन्दा आफ्नो कामलाई बढी महत्व दिन्छन्। एक अनुमानअनुसार विश्वमा करिब आधा मानिसहरू आवश्यकताभन्दा मोटा छन्। जति तेल र बोसोयुक्त पदार्थ प्रयोग गरिन्छ, त्यही रूपमा शरीरमा बोसो बढ्न थाल्छ। चिकित्सकहरूका अनुसार एकपटक बोसो बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्बन नगरे त्यसलाई रोक्न कठिन हुन्छ। अनियन्त्रित जीवनशैलीका कारण मोटोपन बढ्छ। समस्यालाई ध्यान नदिएपछि यो बिरामीका रूपमा देखापर्छ। विश्वमा धूम्रपानपछि मृत्युको अर्को कारण मोटोपन हो भन्ने विश्वास गरिन्छ।
हाई क्यालोरीको प्रयोग
हामीमध्ये धेरैले सन्तुलित भोजन सेवन गर्नुको साटो बढी क्यालोरीयुक्त भोजन गर्छौं। एक गिलास चियासँग एक प्याकेट क्रिम बिस्कुट खानु मोटाइका दृष्टिबाट हानिकारक हो। यस्तो खानपानले शरीरलाई सन्तुलित भोजनबाट वञ्चित गराउँछ। बालबालिका एवं युवाहरू यस्तै किसिमका जंक फुडमै आफ्नो जीवन बिताउँछन्। यसबाट शरीरले धेरै क्यालोरी ग्रहण गरिरहेको हुन्छ। फलस्वरूप यस्ता व्यक्तिको शरीरमा बोसो बढिरहेको हुन्छ।
सही ढंगबाट भोजन नगर्नु पनि मोटोपनको प्रमुख कारण हो। तैलीय एवं मसलेदार खाना खानु तर सन्तुलित आहारमा ध्यान नदिनु तौल बढ्नुको अर्को कारण हो। धेरैजसो व्यक्ति दिनभरि केही न केही खाइरहन्छन्। अर्काथरी व्यक्ति तौल घटाउने निहुँमा केही खाँदैनन्। यी दुवै कुरा तौलका लागि हानिकारक हुन्। कतिपय मानिस राम्रोसँग नचपाई खाना खान्छन्। कोही हतार(हतार खान्छन्, कोही स्वादमा बढी ध्यान दिन्छन्। यी सबै कारणले तौल बढ्छ।
कोही आवश्यताभन्दा धेरै खाना खान्छन्। सामाजिक एवं सांस्कृतिक रीतिरिवाजका कारण पनि मानिसले धेरै प्रकारका खाना खाइरहेका हुन्छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू विभिन्न उत्सवमा मीठो, गुलियो वा तैलीय खाद्यपदार्थको बढी प्रयोग गर्छन्। आफ्नो सामाजिक स्टेटस देखाउने निहुँमा पनि उच्च क्यालोरीयुक्त भोजन खाने चलन छ। कुनै निहुँमा पार्टी, भोज जाने चलनले पनि तौल बढाइरहेको हुन्छ।
बिहानको नास्तामा कम फ्याटयुक्त तर पौष्टिक खाना खानु उपयुक्त हुन्छ। हलुका खानाले भोक मेटाउनुका साथै दिनभरिका लागि ऊर्जा प्रदान गर्छ। व्यस्त जीवनशैलीका कारण बिहानको नास्ता गर्ने समय नमिल्न सक्छ। कतिपयले यसलाई त्यति महत्व दिँदैनन्। बिहान नास्ता नगरी काममा निस्कदा शरीरका लागि आवश्यक ऊर्जा प्राप्त हुँदैन। परिणामस्वरूप व्यक्ति चाँडै थकान महसुस गर्छ। भोको व्यक्ति चिया, कफी र फास्टफुडतर्फ आकषिर्त हुनु स्वाभाविक पनि हो। यसले खाना खानुअघि नै बढी भोक लाग्ने वा पटक्कै नलाग्ने समस्या देखिन्छ। स्वस्थकर एवं सन्तुष्टिदायक नास्ता आवश्यक छ। शारीरिक श्रम गर्ने व्यक्ति, जसको पसिना बढी बग्छ, तिनलाई क्यालोरीको बढी आवश्यकता हुन्छ। चिया, कफी र फास्टफुडले बढी प्राथमिकता पाउँछ। त्यसैले लन्चपूर्व बढी भोक लाग्छ वा पटक्कै भोक लाग्दैन। डाइटिसियनहरूका अनुसार सक्रिय व्यक्तिले लागू तथा नसालु पदार्थविहीन खाना सेवन गर्नुपर्छ। शारीरिक श्रम बढी गर्ने व्यक्तिलाई क्यालोरीयुक्त खानाको बढी आवश्यकता पर्छ। दिनभरि सन्तुलित मात्रामा पानी पिउनुपर्छ। यही नियम भोजनमा पनि लागू हुन्छ। भोजनमा क्यालोरी, फ्याट, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटिनको सन्तुलन भयो भने त्यसले शरीरलाई सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ।
कसरी गर्ने तौल नियन्त्रण
आधुनिक जीवनमा भोजनलाई ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनरमा बाँडिएको छ। स्लिम देखिन चाहने व्यक्तिको तौल उसले ग्रहण गर्ने नास्तासँग जोडिएको हुन्छ। हालै भारतमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणले बिहान नास्ता गर्नेहरूको तौल नगर्नेहरूको तुलनामा कम देखाएको छ अर्थात् बिहानको नास्ता तौल नियन्त्रणका लागि आवश्यक छ। बिहान नास्ता नगर्दा धेरै भोक लाग्ने र एकैपटक धेरै खाएको खानाले बोसो बढाउने सर्वेक्षणले देखाएको छ। जर्नल अफ न्युट्रिसनमा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार बिहान जति नास्ता गरिन्छ, दिनभरि कम भोक लाग्छ। नास्ता गरेपछि मेटाबोलिजमको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। यसैबाट फ्याट घटाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
शरीरमा जम्ने फ्याटका कारण बोसोयुक्त खाना मात्र हो भन्ने कुरालाई डाइटिसियनहरूले अस्वीकार गरेका छन्। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटिनबाट प्राप्त क्यालोरीबाट शरीरलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। हामीमध्ये धेरैजना घिउ, तेल, मख्खन, चीज आदिमा नियन्त्रण त गर्छौं तर आफ्नो डाइटमा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा बढाइरहेका हुनसक्छौं। भोजन नियन्त्रण गर्दा शरीरलाई आवश्यक पर्ने खाद्यपदार्थ खानु आवश्यक छ भने कार्वोहाइड्रेट पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ।
दूध भएको चियाको साटो कालो चिया प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले तौल कम गर्न सहयोग गर्छ। अर्को रिसर्चअनुसार सातामा एकदिन कालो चिया प्रयोग गर्नेहरूमा सामान्य व्यक्तिमा भन्दा कम फ्याट पाइएको छ। १० वर्षसम्म नियमित कालो चिया प्रयोग गर्नेमा तुलनात्मक रूपले २० प्रतिशसम्म फ्याट कम भएको पाइन्छ।
खानेकुरामा सुधार ल्याउनु पनि तौल नियन्त्रण गर्ने उपाय हो। खाना विस्तारै चपाएर खानुपर्छ। अर्को शोधअनुसार खाना खाने गति कम गरे मस्तिष्कलाई पेट चाँडै भरिएको भ्रम हुन्छ। यसले व्यक्ति बढी खाना सेवन गर्नबाट बच्छ। जापानमा १ हजार ७ सय महिलामा गरिएको एक अध्ययनले उक्त कुराको पुष्टि गरेको हो। खाना खाँदा कुरा गर्ने बानी राम्रो होइन। कुरा गरेर खाना खाँदा व्यक्तिले आवश्यकताभन्दा बढी भोजन गर्ने सम्भावना हुन्छ।
सातामा एकपटक उसिनेको भोजन गर्नु अनिवार्य मानिन्छ। एकपटकको खानामा उसिनेको सब्जी मात्र प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उसिनेको खानामा नुन हाल्नुहुँदैन। उसिनेको भोजनमा आलु, सखरखण्ड जस्ता कार्बोहाइड्रेटयुक्त खाद्यपदार्थ प्रयोग गर्नु पनि राम्रो मानिँदैन।
आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रने किसिमले डाइटिङ गर्नुहुँदैन। महिलाका लागि प्रतिदिन न्यूनतम १ हजार २ सय क्यालोरीको आवश्यकता पर्छ। यो भन्दा कम क्यालोरी भए थकान महसुस हुन्छ। यसले शरीरलाई प्राप्त हुने पोषक तत्वको मात्रामा पनि कमी ल्याउँछ। फलस्वरूप प्रतिरोधक क्षमतामा ह्रास आउँछ। फल, दाल, अण्डा, दूधबाट बनेका पदार्थको सेवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
तौल नियन्त्रण गर्ने क्रममा पानीको मात्रा बढाउनुपर्छ। पानी पिउनाले मनमा प्राप्त हुने तृप्तिले भोकको अनुभवलाई दबाउन सहयोग गर्छ। पानी पिउनाले पेट भरिएको भ्रम हुन्छ। यसबाट बारम्बार खाना खाने बानीबाट छुटकारा प्राप्त हुन्छ। पानी खाइरहने बानी भए सफ्ट ड्रिङप्रति मोह कम हुन्छ। यसले सोडा, जुस, लेमोनेड वा आइसक्रिम, सफ्ट ड्रिङकबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त क्यालोरी नियन्त्रण हुन्छ।
जर्नल ऐपिटाइटमा प्रकाशित शोधअनुसार टेलिभिजन हेर्ने बानीले १ सय ४० क्यालोरी बढेको पाइएको छ। प्रतिदिन व्यायाम गर्नेहरूले लामो समयसम्म टेलिभिजन हेर्दा वर्क आउटका लागि समय प्राप्त हुँदैन। फलतः व्यायाम कम हुन्छ र वजन बढ्छ।
ओबेसिटीबाट बच्न भोजनमा सब्जीको प्रयोग बढाउनुपर्छ। पानीको मात्रा धेरै भएका सब्जी छनौट गर्नुपर्छ। लौका, तोरी, फर्सी, हरिया सागपात पानीका राम्रा स्रोत हुन्। यी सब्जीले पेट भर्ने काम गर्छन्। यी तत्वले शरीरलाई भिटामिन, खनिज पदार्थ पनि आपूर्ति गर्छन्। एक अध्ययनअनुसार यदि कसैले ३ कप सलाद लन्चभन्दा पहिले खान्छ भने त्यसपछि गरिएको भोजनबाट उसले अरू दिनको तुलनामा १२ प्रतिशत कम क्यालोरी प्राप्त गर्छ।
७ हजार ४ सय महिलामा गरिएको एक अध्ययनमा अर्को महत्वपूर्ण तथ्य पत्ता लागेको छ। मैदा आदि फाइबरयुक्त भोजन खाने महिलाको तुलनामा प्रतिदिन २ पटक बोक्रायुक्त खाद्यान्न खाने महिलाको तौल बढ्ने सम्भावना ४९ प्रतिशत कम हुन्छ। फाइबरयुक्त खाद्यान्नमा रेसाको मात्रा बढी हुन्छ। यसलाई पचाउन समय लाग्छ। फलस्वरूप दिमागलाई पेट भरिएको भ्रम हुन्छ।
अत्यधिक क्यालोरीबाट बच्न तैलीय पदार्थलाई घटाउनुपर्छ। भान्सामा चीज, पनीर, घिउ, मख्खन आदि सामग्री कम प्रयोग हुनु तौल नियन्त्रणको महत्वपूर्ण उपाय हो। तोरीको तेलको प्रयोग कम गर्दै भेजिटेबल ओइललाई प्राथमिकता दिनु पर्छ।
ट्याग्स: fat women in the world, Iman Ahamad, ताैल घटाउन, माेटाेपना